आमाबुबा बन्ने सहि उमेर कुन? – MEDIA DARPAN
आमाबुबा बन्ने सहि उमेर कुन?
मिडिया दर्पण	 पछिल्लो अपडेट Dec 24, 2018
यो प्रश्नको उत्तरमा तपाईं भन्नुहोला, ‘उमेर भएकै छैन ।’ हाम्रो समाजले स्थापित गरेको मान्यता हो, ‘विस बर्ष पारी, बिहेवारी ।’
अर्थात २० बर्ष पुरा नगरी विवाह गर्न उपयुक्त छैन । किनभने यसअघि हामी मानसिक र शारीरिक रुपले विवाहका लागि योग्य भएका हुँदैनौ ।
अर्कोतिर हामी ठान्छौं, ‘आफ्नो खुट्टामा उभिन सक्ने भएपछि मात्र विवाह गर्नुपर्छ ।’
अर्थात आर्थिक रुपले सुरक्षित भएपछि विवाह गर्नु उपयपुक्त हो । किनभने अरुवाट आश्रति भएर दाम्पत्य जीवन चल्दैन । घरबार बन्दैन ।
विवाह गर्नका लागि शारीरिक रुपले, मानसिक रुपले, आर्थिक रुपले परिपक्क हुनुपर्छ । यसका लागि हामीसँग केही सीमाहरु छन् । जस्तो कि, २० बर्ष पुरा गर्नैपर्‍यो । पढाई सक्नैपर्‍यो । जागिर खान वा उद्यम गर्नै पर्‍यो । अर्थात आफ्नो खुट्टामा उभिने हुनुपर्‍यो ।
यसका लागि हामीलाई २० बर्षपछिको समय पनि काफी छैन । किनभने २० बर्षमा हामीले स्नातकसम्म अध्ययन सकाएका हुन्छौं । यहाँसम्म आइपुग्नका लागि पढाईका लागि मात्र करिब १६ बर्ष समय खर्च गरिसकेका हुन्छौं । औसत पाँच बर्षको उमेरमा एक कक्षामा भर्ना भइन्छ । त्यस हिसाबले १० कक्षासम्म पुग्दा १५ बर्षको भइसकेका हुन्छौं । प्लस टु पुरा गर्न २ बर्ष लाग्छ । स्नातक तहमा ३ वा ४ बर्ष लाग्छ । यसरी स्नातकसम्मको पढाई पुरा गर्दागर्दै हाम्रो उमेर २०, २१ बर्षको भइसक्छ ।
स्नातक तह पुरा गर्दैमा हामी जागिरका लागि योग्य हुन्छौं वा हुँदैनौ ? यो प्रश्न एकातिर छ । आफ्नै उद्यम नहुन सक्छ । वा उद्यम गर्नका लागि आवश्यक पूँजी र अनुभव पनि नहुन सक्छ ।
अब स्नातकोत्तर गर्नुपर्‍यो । यसमा अरु दुई, तीन बर्ष समय लाग्छ । स्नातकोत्तर गरेर जागिर गर्ने, उद्यम गर्ने वा कुनै पेशा-व्यवसाय अंगाल्ने सोंच पालेका छौं भने अझैपनि हामी आर्थिक रुपले निर्भर हुन सकिरहेका हुँदैनौ । यतिबेलासम्म हामी २४, २५ बर्षका हुन्छौं ।
अब जागिर खोज्ने, उद्यम गर्ने, व्यवसाय गर्ने काममा लाग्छौं । जब हामी आफ्नै बलबुतोले आयआर्जन गर्न थाल्छौं, तब विवाहका लागि योग्य ठान्छौं ।
कुन उमेरमा विवाह ?
२५ देखि २८ बर्ष उमेरलाई विवाहका लागि उपयुक्त मानिन्छ । किनभने यो उमेरमा विवाह गरेपछि हामीले आफुलाई व्यवस्थित गर्न, घर-गृहस्थी चलाउन, छोराछोरी जन्माउन-हुर्काउन समय पाउँछौं । हुन त विवाह गर्नुअघि जागिर खानुपर्छ, आयआर्जनमा सहभागी भइसक्नुपर्छ भन्ने छैन । साथसाथै अध्ययन पुरा गरेर मात्र विवाह गर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन । यो हाम्रो परिस्थिती, अवस्था, सामाजिक मान्यता, घरायसी व्यवस्था सबै कुराले निर्धारण गर्ने कुरा हुन् ।
यद्यपी विवाहका लागि भने निश्चित उमेरअवधी नै ठिक हुन्छ । उमेर ढल्किसकेपछि वा उमेर नपुगी गरिएको विवाहले दाम्पत्य जीवनको तालमेल मिलाउन कठिन हुन्छ । भौतिक कुरामा मात्र होइन, भावनात्मक कुरामा पनि थुप्रै झन्झट आइलाग्छ ।
किनभने दाम्पत्य जीवनबाट हामी घर-गृहस्थीमा प्रवेश गर्छौं । दाम्पत्य सुख, परिवार सुखसँगसँगै थुप्रै दायित्व पनि बोक्नुपर्ने अवस्था हो यो । त्यसैले उचित उमेरमा विवाह गरियो भने सबै किसिमको भूमिका निर्वाह गर्नका लागि हामी सक्षम हुन्छौं ।
विवाहपछि यौनजीवनले पनि खास अर्थ राख्छ । यौन जीवनबाट सुखभोग प्राप्त गर्नका लागि पनि उमेर कारण बन्छ । वैंशालु उमेरमा नै यौन-सुखको चरम सन्तुष्ट लिन सकिन्छ । यौनमा सक्रिय हुन सकिन्छ । दाम्पत्य जीवनका लागि यो अहंम कुरा हो ।
अर्को कुरा यौन एक प्राकृतिक क्रिया हो र अनिवार्य पनि । यौन मनोविद करुणा कुँवर भन्छिन्, ‘यौन क्रियाकलापले दुई जना -श्रीमान्-श्रीमती’को सम्बन्धलाई नजिक बनाउँछ । उनीहरुले एकअर्कालाई स्पर्श गर्दा ओक्सिटक्सिन नामक हर्मोन बढ्छ । यो हर्मोनलाई प्रेमको हर्मोन भनिन्छ ।’
उनले के पनि भनेकी छिन् भन्, स्वस्थ्य र सक्रिय यौनजीवनले दाम्पत्य सुख मात्र प्राप्त हुने होइन, दुबैलाई निरोगी र तन्दुरुस्त पनि बनाउँछ । विभिन्न अध्ययनले देखाएको छ, नियमित यौन सम्बन्धले मुटु रोगदेखि कोलोस्टोरसम्म नियन्त्रणमा खास फाइदा पुग्छ । विवाह गर्नु भनेको यौन जीवनलाई सक्रिय र व्यवस्थित तुल्याउनु पनि हो ।
एक अध्ययनले भनेको छ, अविवाहितको तुलनामा विवाहित व्यक्ति चिन्ता, तनाव, एक्लोपनको समस्याबाट मुक्त हुन्छन् । जबकी अविवाहितमा यस्ता कैयौं मनोविकार हुनेगर्छ ।
कुन उमेरमा बालबच्चा जन्माउने ?
विवाहपछि आफ्नै कोखको सन्तान हुर्काउने रहर पनि हुन्छ । सन्तानलाई हामी आफ्नो वंशको निरन्तरता ठान्छौं । यो प्राकृतिक चक्र पनि हो । किनभने निश्चित उमेरपछि हाम्रो मृत्यु हुन्छ । त्यसपछि पनि सृष्टिलाई चलयामान बनाइराख्न अर्को पुस्ताको खाँचो हुन्छ ।
दाम्पत्य जीवनमा सन्तान कहिले जन्माउने भन्ने कुराले निकै महत्व र अर्थ राख्छ । कतिपयले आफुहरु अझ परिपक्क भइसकेपछि सन्तान जन्माउने योजना बनाउँछन् । कतिपयले विवाह लगत्तै पहिलो प्राथमिकतामा सन्तान जन्माउने कुरालाई राख्छन् ।
कुन उमेरमा सन्तान जन्माउने भन्ने कुरा पनि यहाँ महत्वपूर्ण हुन्छ । किनभने कम उमेर वा बढी उमेरमा सन्तान जन्माउनु शारीरिक र मानसिक जोखिमका कुरा हुन् ।
एक अध्ययनमा के भनिएको छ भने, उमेर ढल्कन नपाउँदै सन्तान जन्माउनुपर्छ । धेरै उमेर पछि सन्तान जन्माउँदा आफ्नो सन्तान आकर्षक नहुने पनि उक्त अध्ययनले खुलाएको छ ।
विएना युनिभर्सिटीले गरेको अध्ययनले त के भन्छ भने २० बर्ष उमेरका पिताको सन्तान बढी आकर्षक हुन्छ । शोधकर्ताको तर्क के छ भने, धेरै उमेरका पुरुषको स्पर्ममा जेनेटिक म्यूटेशन हुन्छ, जसको सोझो असर उनको बच्चाको सौन्दर्यमा पर्छ ।
पढ्नु, करियर बनाउनु, विवाह गर्नु, बालबच्चाका आमाबुवा बन्नु यी एक नियमित क्रिया हुन् । र, यो क्रिया एउटा लयमा हुनुपर्छ । तबमात्र जीवनको धुन बज्छ ।
अर्थात जुन उमेरमा जे कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने हो, सो पुरा गरेपछि हामी थप व्यवस्थित हुन्छौं । त्यही कारण त हाम्रो पिता पूर्खाले जीवन पद्दतीको विकास गरेका छन् । संस्कारको विकास गरेका छन् । हिन्दु पद्दतीले जीवनमा १६ संस्कारको व्यवस्था गरेको छ । कुन उमेरमा के गर्ने भन्ने कुरा यहीबाट निर्धारण हुन्छ । यसले हामीलाई सही समय, सही उमेरमा सही काम गर्ने मार्गदर्शन दिन्छ ।
म पैसा र स्टारडमका लागि काम गर्दिनँ: साहरुख
म कथामा कुनै पात्र खोज्छु :आमिर खान